Litla Stella, Skútustaðir 2a ngaseLake Myvatn - I-Airbnb
Litla Stella, Skútustaðir 2a ngaseLake Myvatn
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAudur
Indlu encinci eyakhiwe ngonyaka ka-2015 kwindawo emangalisayo kwindawo emangalisayo yeLake Myvatn. Ungqongwe yindalo kunye nobomi beentaka uya kuziva usekhaya kwikhabhathi yethu epholileyo, enekhitshi, ibhedi elingana nokumkanikazi, igumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye nebhafu enkulu eshushu. Ukuzityisa. Ukufikelela kwibhafu eshushu.
Iimbono ezintle ngamanyathelo ambalwa ukusuka kwindlwana. I-pseudo craters emantla kunye nomhlaba omanzi kunye neentaba ezisemazantsi nasempuma.
Indlu encinci efudumeleyo nenomtsalane, kunye nezulu lokwenyani labantu ababini. Imi kwigadi yethu kwaye ijonge kwintlango esemazantsi. Igumbi lokulala elincinci elinebhedi enkulukazi. Igumbi lokuhlala elinesofa kunye nekhitshi elincinci elinesipheki, isinki encinci, iketile kunye nethosta. Uxolo, akukho ndawo ye-oveni kodwa i-microwave iyafumaneka kwiindwendwe. Khawuyibuze nje kwaye siza kuyizisa kuwe. Igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese, isinki kunye neshawari.
Ukufudumeza okuphakathi emgangathweni. Umhlaba ojonge emazantsi, ukuya kumachibi, iintaba kunye nommandla ophakamileyo osemazantsi. Iparadesi yokwenene kubathandi beentaka entwasahlobo nasehlotyeni.
Ukufikelela kwibhafu eshushu egadini.
4.90 · Izimvo eziyi-470
Indalo emangalisayo kunye nobomi beentaka ngasemnyango. Indawo yaseMyvatn yindawo enentaba-mlilo. Yiparadesi yabathandi bendalo nabafoti kwaye ineendawo ezingenasiphelo zokutyelela nokufumanisa. Iindawo zokutyela zikufuphi.
Akureyri: Iyure enye uhamba ngemoto.
Laugar: 20 min drive (idama lokuqubha kunye nevenkile enkulu).
Egilsstadir: 2 iiyure drive.
I-Supermarket e-Reykjahlid: i-10-15 min drive.
Iibhafu zendalo: I-20 min drive kunye ne-swimmingpool 20 min (Laugar).
I-Dettifoss emangalisayo: i-45 min drive kunye ne-Godafoss 30 min.
Umbuki zindwendwe ngu- Audur
Audur & Gylfi
Ikhabhathi isegadini yethu, imi ecaleni kwendlu yethu kwaye sihlala kumgama weemitha ezimbalwa kuphela. Ukuba unemibuzo okanye ufuna ulwazi malunga nendawo okanye ukuhlala kwakho, vele uqhagamshelane nathi kwaye siya kukunceda ngovuyo. Khalisa nje intsimbi yethu yasecango kwigumbi eliphezulu kwaye siza kuhla size sikuhlangabeze.
Ikhabhathi isegadini yethu, imi ecaleni kwendlu yethu kwaye sihlala kumgama weemitha ezimbalwa kuphela. Ukuba unemibuzo okanye ufuna ulwazi malunga nendawo okanye ukuhlala kwakho,…